घट्यो उपत्यकामा घरजग्गा कारोबार | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर घट्यो उपत्यकामा घरजग्गा कारोबार
घट्यो उपत्यकामा घरजग्गा कारोबार
वर्षमा एकपटकभन्दा बढी कित्ताकाट गर्न अझै रोक
काठमाडौं । उपत्यकामा घरजग्गा कारोबारमा कमी आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को साउनदेखि कात्तिक महीनासम्म जग्गा रजिष्ट्रेशनबाट उठेको राजस्वले यस्तो देखाएको हो । उपत्यकामा गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को पहिलो ४ महीनामा रू. ३ अर्ब ११ करोड ४२ लाख रजिष्ट्रेशन शुल्क उठेकोमा चालू आव २०७४/७५ को सोही अवधिमा घटेर रू. २ अर्ब ६७ करोड ४८ लाख मात्र रजिष्ट्रेशन शुल्क उठेको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक सुशीलप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । गत आवको पहिलो चौमासिकको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा ४३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रजिष्टे«शन शुल्क कम उठेको हो ।
चालू आवको ४ महीनामा उपत्यकाका सबै मालपोत कार्यालयमा गरी ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि भूमिसुधार मन्त्री तथा सचिवले सो आदेशलाई फुकुवा गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । मन्त्रीद्वारा दायर निवेदनमा जग्गाको अन्तिम स्वामित्व सरकारको हुने अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन नै भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बाटो खोलिदिन आग्रह गरिएको थियो । कृषियोग्य जग्गालाई कुनै पनि खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीका रूपमा विक्रीवितरण गर्न नपाउने सरकारी निर्णयलाई रोक्ने गरी भएको अन्तरिम आदेशलाई हाललाई फुकुवा गर्न सर्वोच्च अदालतले मङ्सिर ३ गते अस्वीकार गर्दै विवादित सो निर्णयलाई ३० दिनभित्र निरूपण गर्ने गरी अन्तिम सुनुवाइ गर्न इजलाशले आदेश दिएको छ ।
यस मुद्दाको पेशी आगामी पुस ३ गते रहेको भूमिसूधार तथा व्यवस्थापन विभागले जानकारी दिएको छ । यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले साउन २६ गते सरकारले गरेको निर्णय अझै कार्यान्वयन भइरहेकाले चालू आवमा जग्गा खरीद विक्रीमा कमी आएको सम्बन्धित व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सरकारी निर्णयका कारण अहिले बैङ्कहरूले घरजग्गा खरीदका लागि कम दरमै ऋण दिइरहे पनि कारोबार भने बढ्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।